MAJAAJILO « HiilDan.Com
MAJAAJILO DANYARE IYO DANANA, WAA DUQ IYO DUQDIISA, WAA CARRAB IYO LABADIISA DAAN, ISMA DILAAN, ISMANA DAAYAAN, ISMA DAYRSHAAN ISMANA DUGSADAAN, DAGANAANSHO IYO DIRIR MIDNA KUMA AHA HESHIIS. WAA MAJAAJILADA HIILDAN OO TAXANE AH.
Majaajiladda 10naad (20/04/2010):
Lafihii Mujaahid Timacadde (AUN) miyaa iyagana dib loo soo faqo, si loogu qoro SNM, Illeyn Faqashnimuu Ku Dhintaye..!
DaNana waxay u socotaa Tacsi heer Qaran ah !. Waa tacsi an caadi ahayn, oo waxa dib loo aasayaa lafihii marxuum ka tirsanaa qooyska reer DhanXiir oo dhintay dhawr iyo labaatan sanadood ka hor. Waana mashruuc ka mid ah ololaha Lafo-Qaramaynta Dalka Somaliland. DanYare arrintaasi aad iyo aad ayuu ula yaabay oo waabu ka dhirfay, duqdiisana (DaNana) waabu ku dhirbaaxi gaadhay..!!!. Sheekadan ayaa dhex martay.
DaNana: Tacsi heer qaranaan u socdaaye, DanYare miyaadan i raacayn?
DanYare: ‘Innaa Lilaahi Wa Inaa Ileyhi Raajicuun Heer Qaran’…! Heer Qaranbaan baan u tacsiiyeeyay, balse yaa dhintay?
DaNana: Waxa dhintay wiil ka tirsan reerka aynu gacalka iyo xigaalka nahay ee DhanXiir
DanYare: Allaha u naxariisto, goorma, gaddee, geyigee ayuu u dhintay?
DaNana: Wuxu dhintay 27 sannadood ka hor, isagoo mujaahid ah, gobolkiisana xoraynayay.
DanYare: Salaamaad, Yaa yaa yaa, naa maxaad tiri, bal iigu celi..!!!
DaNana: Xilloo, waa saacaduhuu dhegaha iska qaadi jiray sidii siidhi lagaga afuufay, waxan ku idhi wuxu dhintay labaatan iyo todaba sano ka hor.
DanYare: oo dee 27 sanadood ma inagaa is qabnayba, mise inagaaba DhanXiir gacal la noqonay, maxaa inooga gidhiish ah?
DaNana: Yaa saaxibul DanYare wa-caqli saqiir waaxid, miyaynaan is qabin 48 sannadood in ka badan, intaasna uu DhanXiir jirin?
DanYare: Alloow ma run?, soowtaad dorraato lahayd waxaynu is qabnay 18 sannadood ee sannad guuradeena iga tun, markii an ku didhi 48 sannadood ayaan is qabnayna ad igu qoonsatay, ee ad surucyo iyo wadaado iyo quruumihii iyo rooxaantii harag shabeelle oo dhan ad ii soo xaadirsay. Midkee iyo markee ayaad adigu qumman tahay?.
DaNana: Alloow nimaan wax ogayn ha cadaabin, Islaanta uga digtana ha cadaabin. Dee 48 sannadood waa intii la ii kaa maslaxayay, ee Faqashtu dalka haysatay. 18 sannadoodna waa intii aynu xor isku qabnay ee mujaahidintii SNM ee reer DhanXiir dalka xorreeyeen, waliba imika 19 ayay ku dhawdahay sannad guuradeenii, oo waa inaad iga tunto bisha soo socota 18keeda…!
DanYare: Alliyo Nabiyo Rasuul !!!, igu wallee haddii an ku dharbaaxi karo waan ku dharbaaxi lahaaye laakiin lafahaygaan u cabsoonayaa in nolosha lagu faqdo.!!!.
Waxanse ku weydiiyay, haddii mujaahidintii SNM lafahooda dib loo aasayo, oo la rabo in lafaha dalkoo dhan la qarameeyo oo SNM lagu wada qoro, xitaa dadkii ka hor jeeday SNM ama horteedba calanka u halgamay. Dee bal waayahaye Lafihii mjuaahid Timacadde (Allaha u naxariistee), iyo Raggii la midka ahaa ee calanka Soomaaliyeed ee buluugga ah, usoo halgamay ee u gabyi jiray, miyaa iyagana lasoo faqo, Ileeyn faqashnimay ku dhinteene, si loogu qoro SNM miyaa lafahooda dib Si heer qaran ah loogu aaso?.
DaNana: Yaa u kala warrama, yaw kala warrama, wax isma yeeleenee dadyoow kala warrama?; Kuwii iyagoo faqash ah dhintaybaad sheegaysaaye kuwa iyagoo faqash ah nool ayaa lafahooda iyagoo nool intoo laga soo saaro, oo dib loo aaso, hadana dib loo soo fiqi dooonaa, oo lagu qori doonaa SNM, kadibna dabbaal deg qaran iyo aas qaran iyo tacsi qaran loo samayni doonaa..!!!
DanYare (oo cadhaysan ayaa ku heesaya)
Wadaadyahay wareersani war li’idaa
Wallee war li’idaa
SNM eey War li’idaa
Tacsidiyo weerkan Qaran
Waa laysku haystaa
Micnaha weedha Mujaahid
Waa laysku haystaa?
DaNana (oo an jixinjixayn ayaa ku jawaabaysa)
Adnaa wewel cusub
Faqashoow War li’idaa
Waxad SNM ku weydeen
Waa mujaahidiin u odhan weydeen
Wixii madax idinka dhigtay
Majaalida 9aad: SADDEX KALA DARAN MID DOORO (14/04/2010)
Kadib markii muddo dheer la sugayay, ee la saadaalinayay. ee la saluugayay, ee la sahwiyay, ee la siisan la’aa. Ayaa waxa subaxii danbe lagu war helay Gudida Goorsheegta Komishanka Qaranka, oo si la yaab leh u iclaamiyay, goorta ay dhici doonto doorashada dalweynaha ku yaalla duleedka daliga Afrikada Bari ee loo yaqaano DALKA-LAND. Gudida Goorsheegta Qaranku, waxay sheegeen inay si deg deg ah doorashadaasi u dhici doonto ama habeen ama dharaar wixii ka danbeeya bisha danbe ee lixaad, horraanteeda ama dhexdeeda ama dabayaaqadeeda, ama intaba oo laysku daray!.
Hadaba saddexda wiil ee u tratamaya doorashadan ayaa waxay kala yihiin saddexdii wiil ee ay dhaleen DanYare iyo DaNana. Sidaa daraadeed ayaabay waxay DanYare iyo DaNana uga munaaqishoonayaan midkii loo dooran lahaa hoggaanka dalkaasi, iyagoo aad u dhagaysanaya cajalad ay saddexdooda wiil isugu faanayaan, oo mid waliba sheegayo inuu u qalmo in hoggaanka dalka loo doorto. Sheekadan ayaana dhex martay: DanYare: DaNanaay gacaliso, haynagu daalin cajaladan, ad caawoo dhan ku celcelinaysee, aynu danteena ka raacno.
DaNana: Aynu danteenna ka raacno ku lahaa, doorashaa lagu jiraa oo saddexdeennii wiil u tartamayaane, horta mid dooro, anna mid an doorto, dadka kalana midd ha doortaan, dabadeena markaasaynu isk aheshiinni, oo danteenna aynu ka raaciye..!
DanYare: Dee maxaan ku kala doortaa saddexdeenna wiil?; mid waa DAcweysane, oo dawladduu horey u raacay hoggaamiyana u noqday, danyar iyo maato iyo wixii miskiin darbiyada jiifayna xoolahoodii wuu dudubiyay. Midna waa Docaysane oo daaskeena ma dhaafo, markuu dhaafana, wadaad tabliiq ah ayuu noqdaa oo marna Nabiga ku salliya marna siyaasad ku salliya.!
Midka kalana dibaduu innaga jiraa oo DahabShiil ayuu masruufka kuu soo dhigaa adiga, anigana imaba tohoydo. Dee waa Saddex kala daran mid dooree, anigu an hadalka ku danbeeyee, DaNana adigu marka hore midkeed dooran lahayd?. DaNana: Horta an kaa shaafiyee, wiilasheenna midka hore DAcwesane ma ahine waa DUcaysane, isagu dawladduu hoggaamiyaa cidna kama daba hadli karto, oo waa amar dawla muddeec, waa nin nin ka tagey, walibana waa aroos aroos ka tagey. ! Midkan ad Docaysane ku sheegtay isna waa Dugsiiye, oo daaskeena ayuu ogyahay waxa ka dhacaya, danta reerkana wuu yaqaanaa, marna waa wadaad diinta yaqaana, marna waa wadaad siyaasadda ku xeel dheer. Wuxu yidhaahda daaskan anigaa ku dhashay, kuwa kalana degmooyin kale ayay ku dhasheen – Alloow ma runtii?..!!!
Allaahuma Salli Calaa Muxamad, midka saddexaad ee ad Dibadaysane ku sheegtay, isaguna waa Deeqe, oo dee isagabaa na masruufa , oo waa Dahabkeen marna Deeq keen, Dahabsiil iyo Dheeman Shiilba isagaa ka wakiil ah. Hadana jitoo kolleyba, anigu waxan is leehay, “midho gunti kuugu jira, midho geed kor yaalla looma daadiyo“, oo waxan dooran lahaa midka imikaba innoo hoggaamiya dawladda ee wiilkeenna DUcaysane.
DaNana: oo hadalkii sii wadata ayaa raacinaysa heestan
Waar hooy waar hooy nimankani
Waa wiilashii an Nuujiyoo
Midba mid u naas daayaye
Adna Aabe u nuguloo
Niyad ku doorta mid u noqo..!!!!
DanYare: oo yaaban ayaa ku jawaabaya
Naa hooy naa hooy nimankani
Waa wiilasheennoo is neceboo
Midba miduun nacab u yahay
Anna naxlibaan ka qaadaye
Ninkoodna dooran maayo….!!!!
Majaajilada Siddeedaad: SAGAL MADAR (SINGLE MOTHER), Yaa Qaba? !!!!
DanYare iyo DaNana, waxay maanta ka wada hadlayaan arrimaha ka taagan qurbaha, sida gunnada la siiyo dadka, gaar ahaan hooyooyinka iyagoo la qabo hadana ragooda dafira ee isku sheega waxa la yidhaahdo ‘Single Mother’, doorashooyinka, iwm.. Kuwaasi oo dhammaan wiilkooda qurbaha u joogi uu uga soo sheekeeyay.
DaNana: Ma maqashay wuxu yidhi wiilkeennii ‘Dibadaysane’, ee dibada inaga jiray?
DanYare: Kaasi waa ilma hooyoo, adiguuunbuu wax kuu sheegaaye, muxuu yidhi, muxuu yidhi, bal ii sheeg muxuu yidhi?
DaNana: Wuxu yidhi dumarkii waxay noqdeen waxa la yidhaahdo ‘SAGAL MADAR’ …
DanYare: Oo maxay tahay SAGAL MADAR, ma magac iyo abtirsiin qofbaa, ma ilma madarbay wada nqodeen?
DaNana: Maya waa magaca afka qalaad loo yaqaano hooyooyinka iskaabulada ah hadana la qabo …………..
DanYare: DaNanaay maxaad tidhi maanta uunbaad war keentaye? waa ‘hooyo iskaabulo ah hadana la qabo’, waa ‘Single Mother’ miyaa?
DaNana: Haa wax sidaas u egbuu ku sheegayay sin-gal madar iyo sagal madar iyo wax sidaas u dhawaq eeg
DanYare: Haye, ‘Single Mother’ yaa qaba, haday hadana Iskaabulo tahay, hadana hooyo ubad dhalaysa ay tahay?
DaNana: Waxa qabuu yidhi ugu yaraan saddex oday ayaa qaba, hadda waa marka ay ugu yartahay, marka ay ugu badan tahayna ilaa sagaalbay gaadhaan iyo wax kasii badan, oo waa markay gaboobaan, markay bukoodaan, markay hawl gab noqdaan, markay curyaamaan, oo kuwaasina uu mid waliba nin gaar ahi ku siiyo gunno.
DanYare: Haddii la yaabo yaasiinka….Salaamaad….!!!!. Islaan iskaabulo ah, hadana ugu yaraan saddex nin qabto ama soddonba gaadhaan, hadana muslim ah, oo maxay kala yihiin saddexda nin ee ugu horreysi, doonimaayo intaas in kabada inaan ogaadee. Sideeyse ugu yihiin heshiis?
DaNana: Saddexda nin ee ugu caansan ee ugu horreeyi waxay kala yihiin; mid jeebaduhuu u buuxiyaa islaanta oo waxa la yidhaahdaa Ina-kama Sabboort (waxay u jeeddaa Income Support !), Midna carruurtuu Islaanta u koriyaa, oo waxa la yidhaahdaa Jaale Banafit (waxay u jeeddaa Child Benefit), odayga kalana kirada guriguu ka bixyaa oo waxa la yidhaahdaa Hawsen Banafit (waxay u jeeddaa Housing Benefit). Heshiisna waxay ugu yihiin, dee mid kastaba bishii ama todobaadkii ayuunbuu hal mar gunadiisa bixiyaa, kadibna wuu iska baxaa, oo dee iskumaba soo gaadhaan guriga, ismana arkaan. Kadibna wadaadkii dhuumanayay ee reerka lahaa, ayaa daaqada kasoo dhaca..!!!! Dee imakana DanYaroow, dumarkii iyo ragii iyo carruurihii waxay yidhaahdeen doorashada waan u dareeraynaa oo Odayga ugu wada weyn odayadaas ee gunada bixiya ee, single mother-kana masruufa, carruurtana biiliya, odaydana marfishka ku masruufa, oo magaciisa la yidhaahdo GOROD BOON (Gordon Brown), ayaan doorashda ugu ridaynaa.. Waana saxbaan leenay ee odaygaas Gorod Boon reerka xaqbuu ku leeyahaye halloo codeeyo.!!!! DaNana, oo hadalka sii wada ayaa ku heesaysa: Gorod wuxu ina leeyahay lama kala sarreeyee, sinma sinma, safka wada gala, Single Mother wada noqda..!!!
DanYare oo yaaban ayaa wuxu ku heesayaa.
Illeyn qiima ma lahoo
Gunnaa lagu qaraqiyaa
Waa Su’aal Qarrribanoo
Qiil aan u waayaye
‘Single Mother’, yaa Qaba?
Doorta GOROD BOON ..!!!
Majaajillada 7aad : DanYare iyo DaNana.. 04/04/2010: Martidii Arooska: Haddaan Nin Danbaba U baaqo
Waxa lasoo gaadhay xafladdii Arooska wiil ay dhaleen DanYare iyo DaNana. Waxay DaNana ku mashquulsan tahay inay soo taxdo dhammaanba dadka ay rabto inay ku marti qaado xafladaas Arooska. DanYare, wuu yaabanyahay oo sheekada ayuu ka gurayaa, kolba qof ayuuna su’aalayaa sobabta ay u marti qaadayso. Sidan ayay u dhacday:
DaNana: Waxan Doonayaa inaan qorto dadkii aynu ku macsuumi lahayn munaasabada Arooska wiilkeenna iyo Gabadheena ina DhanXiir.
DanYare: Haye bal soo daa imisa qof ayaad haysaa?.
DaNana: DhanXiir waa Aabihii inanta dhalay oo waa koow, Dhudi waa hoyadeed oo waa laba, DhakaFaar waa abtigeed oo waa saddex, Geel-jire adeerbuu u yahay oo waa afar, iyo afar iyo afartan kale oo inanta ehelkeeda iyo qaraabadeeda ah.
DanYare: Oo Dhanka wiilkana, imisaad kusoo dartay?
DaNana: Allaahuma Salli Calaa Muxamad, dee dhanka wiilku waa dhankeennee, waxa ku jira aniga iyo inta ila dhalatay oo muxaafidka dawladda Ah, illeeyn inankeenu dawladuu ku jiraa oo wakiil sare ka yahaye, intii muxaafidka ah oo dhankayga ka socota ayuunbaa arooska iman karta.
DanYare: Aniga ma igu dartay liiska?
DaNana: Dee adigu duqii inanka dhalaad tahaye, haddaad iska aamusto oo ad ballan qaado inaanad ku heesayn DAcwaysane Wiilkayoow..iwm.., dee waanu kugu soo dari, Guul-wade ku ilaaliyana garabkaagaanu dhigi.
DaNana: Waar bal quduradan iyo qardabadan daawada, ma arooska inankaygaad siyaasad galisay, oo guulwade lay garab dhigayaa, mise anigaaba ka heesi kara, oo xumaan ka sheegi kara?
DaNana Dad ayaa la aaminaayoo axdi keebaa lala dhigtaa? ayay ku heestay habar reer Jabuuti ahi, ma adigaa is hayn kara, soowtii ad Arooskenaba ka heestay ee ad lahayd “Gaafkana Aniyo Islaantaydu, Gaadada an isa Saarnee, Guriga nooga baxa, Guriga nooga wada baxa”, ee dadkii kula wada yaabeen.
DanYare: Habar reer Jabouti ahi heesta hore kuma qaadine, odaybuu ahaaye. Heesta Gaafkeena ee anigu an ku heesaynaa dee hammuuntii jacaylkaa ii kaa haysoo, waan sugi kari la’aaye. Bal DaNanaay hay soo xusuusin waayee, ka soco yaa kale oo ad kusoo daraysaa casuumada?
DaNana: Ugaas Xumadu Xamaadu Kaako, oo ah Ugaaska canfarta kusoo dar, isku reer Binu Axmad baan nahaye
DanYare: Ugaaska ciisahana?
DaNana: Camalkiisaa ku daraye ku dar Ugaaska Ciisaha ee Badal Geelle Batal, isku reer Binu-Cali baan nahaye
DanYare: Alloow ma fariid dheh, ka soco, Ina Geelle Batal ma aha ugaase, Ugaas Mustafe dheh..!
DaNana: Dhankii fanka iyo fannaaniinta haddii an fiirsado, dhammaan kooxaha oo idil, sida kooxda dhaygag, kooxda dhakafaar, kooxda dhabano hays, kooxda dhafoor goror iyo kooxda dhinacyo badan intaba waan macsuumay. Sawirkana waxan macsuumay farshaxankii caanka ahaa ee COOMIR AMMIIN.
DanYare: Wallee warbaa dhacay, oo waxaasoo wada dhaygagsan dhul qaadaba uma haynee, yaa kalood kusoo daraysaa, farshaxiiska Ammiin Caamir isagu waaba iska oolraydhe?
DaNana: Allaahuma Salli Calaa Muxamad, inantii buurnaydee, ‘Saado-Badhqiya’ iyadna kusoo dar..!
DanYare: Waa tuma taasi?
DaNana: Waa tii dee
DanYare: Waa tee dee?
DaNana: Waa ta heesta dee
DanYare: Heestee dee?
DaNana: Heestii dee
DanYare: Tee dee?
DaNana: Tan dee
(DaNana, oo heesaysa)
Ma ogtihiin beri samaadkii
Bilic waxan lahaa qurxoonoo
oo sida boqoradii Balqiisiyo
Bureeqo lay moodi jiraye
Imikana da’diibaa i budlisoo
Igu soo baxdoo i haysee
Markaasay badi wiilashiina
Bariidadaba ila dhaafeene
Aniguna cadhaan u booyoon
Ragii wada baalasheeyaye
Ninkii iga soo hor baxaba
Bustaalaan ku sheegayayee
Billaahi miyaan danbaabay?
Sidaan u yara barraahdayba
Suuradaydii way badalantaye
haddaan bismilysan sidaan ahay
Haddaan nin danbaba u baaqo
Haddaan Cabdi Nuur u baroorto
Bulshooy Aniga i budheeya..
Majaajilada 6 aad: MA INANTA DHANXIIR DHALAY?
Wiil ka mid ah wiilasha DanYare iyo DaNana ay dhaleen, ayaa wuxu jeclaaday gabadh. Waa gabadha deriska ah, oo waxa dhalay DhanXiir. DaNana way la rabtaa, DanYare muxuu ka yidhi?: DaNana: DanYaroow, wiilkeenii Ducaysane, ma ugu ducaysay gabadha Dariskeena?.
DanYare: Ma Dariskeena bidix, mise ka midig, mise ka hore, mise ka dhexe mise ka danbe. Dariska dhinaceeya?.
DaNana: Odayga maxaa daaray, dee mayee waa daartan dhinaca bidix inagaga dhegsan, ee jardiintana an wadaagno, waa jaarka innoogu dhoow.
DanYare: Ma guriga DhanXiir?
DaNana: Haa Guriga DhanXiir
DanYare: Ma reerka DhanXiir?
DaNana: Haa reerka DhanXiir
DanYare: Ma Inanta DhanXii dhalay?
DaNana: Haa inanta DhanXiir dhalay
DanYare: Ma tii Jinku galay ?
DaNana: Jin ma galine, Jacaylbaa galaye, Haa waa iyada
DanYare: Ma inankaygay Jeclaatay?
DaNana: Haa inankaagay jeclaatay
DanYare: Isna Muu jeclaaday?
DaNana: Haa wuu jeclaaday DanYare: Dhinacuu ka jeclaaday?..!
DaNana: Kolba Dhinacuu ka joogo
DanYare: Hadal iyo dhammantii; Ma DhanXiirbaan gabadh ka doonaa?..!
DaNana: Haa wa sidaad ku dhammaysay, DhanXiir gabadh ka doon, DanYare: Haa haa, Ma anaan garan Geela DhaNxiir laayay…! (kadibna wuu heesayaa) Adduun waa Dhakafaar
War iyo DhanXiirbaa ka hadha
Ruuxna kuma dhergayee
Dhibtuna waa waa waa
Waa lama dhaafaan
Markaan DaNanaay ku dhahay
Adigu Reerkaaga dhaqo
Miyaad DhaNxiir Inantiisa
U dhis wiilkayga tidhi………!!!! ………………………………….HiilDanYare……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Majaajilada 5aad: SOO HOR CAAHSAQA
………………….. ……………….. ……………….
Majaajilada Afraad: DanYare oo Ammaanaya DaNana DaNana, waxay maanta rabtaa inuu duqeeda DanYare, aad iyo aad u ammaano, oo hees uu ku ammaanayo u qaado. Sida qaalibka ahna, DanYare ma aha nin ku fiican sida wax loo ammaano. Bal hadaba aynu eegno halkay isla maraan. DaNana: Haddii ad i ammaani lahayd, DanYaroow maxaad odhan lahayd? DanYare: Cajiib, illeyn cimrigaagoo iska raagay, habar i amman ku lehna wuu ku tusaa. DaNana: Waxba hadalka ha calaline, waanse kuugu celinayaaye, haddii ad i ammaani lahayd maxaad i odhan lahayd ayaan ku idhi DanYare?. DanYare: Haddii an ku ammaani ..lahaa, haddii an ku ammaani lahaa.. waxan ku odhan lahaa: Intii aan jirayee An joogay dunida
Mid adi kula jaada
Maba Jalleecinee Sidii Jinacii
Jeenyo u ekeey Waxan u jeedaa
Inaan kula joogee
Inaan ku jashoo
Jiqlaha ku dhigtee
Ilwaad Jinaweey. DaNana. Illeeyn margi adkaaday lama maroojin karo. Odayga maxaa uga ba’ay sida wax loo ammaano. Hadaba waa kane, ma kalar balayn (colour blind) buu qabaa, mise kaneecaa soo cuntuugtay. Ma aniguu igu leeyahay Ilawaad Jinaweey, jeenyo jalamadeey, jilbo jinaceey iyo wax an looba joogin.!. Hase yeeshee waa sidaan u qaato, oo waxan u qaadanayaa inuu u jeedo: Sidii qalanjadii
Ilwaad qurexeey………………… Majaajilada Saddexaad: Dacwaysanne
Doorkan maanta ahna waxay DanYare iyo DaNana ku murmayaan saddexdoodii wiil midkii loogu hor dhisi lahaa.
DanNana: DanYaroow, saddexdeenii wiil ee kala ahaa, Ducaysane; Docaysane iyo Dibadaysane. Dee kolka waxay noqdeen rag waaweyn oo qaangaadh oo guur doon ahe, miyaad ka fikirin sidii wiilasha aynu ugu dhisi lahayn?. DanYare: DaNanaay maxaad tidhi, bal hadalka iigu celi. Ma waxad na leedahay, saddexdeenii wiil ayuunbaa mar kaliya wada kobcay oo is wada leekaaday oo wada guur doon ah?. DaNanaay wiilasheena, adigu awel hore ma mar kaliyaad wada dhashay, oo ma mataano isku wada ilko eg bay ahaayeen?.
Dee bal waayahaye hadduu Alle kuu roonyahay, miyayna kala waynayn oo aanay kala yaran, oo aanay kala dheerayn oo hadana kala gaabnayn. Oo midkood bidaar lahayn, midkoodna xaad lahan, midkoodna gadh lahayn, midna shaarubo lahan. Siday wax u jiraan DaNanaay, bal warka ii bal-ballaadhi.?
DaNana: Xillooo, waakaas, waa saacaduu i moodi jiray habar asaasaqa. Haddaad adigu sabciinkii ku jirto anuu cishiriinkiibaan wali ahaye. Carruurteena mar ma wada dhalin oo adaa moodanayee mataano maahayne. Waxbase dee makala weyna, oo waxay ahayd ‘mijini gashay mijini baxday’ oo hadaan laga tegin way isku wada naas daayeen. DanYare: Dananaay midkeed ugu hor dhisi lahayd wiilasha, an hadalkaba ku jarnee?. DaNana: Wiilkeenna Ducaysane ee dawlada innoogu jira, kaasi aynu ugu hor dhisno, dabadeedna an Docaysane ku xijisiinno isagu docda guriga uun inoo fadhiya ee an meelba inooga dhaqaaqin. Allaahuma salli calaa muxumad, dabadeedna aynu ugu danbaysiino, wiilkeena dibada innaga jira Dibadaysane. DanYare: Illeyn quduruba waa tanoo kale. Ma magacdii wiilashayda ayaad sidaa u badashay. Waatii an horey kuugu sheegay oo wiilka dawladda innoo galay ma aha Ducaysane, ee waa Dacwaysanne. Isaga dacwadbaan u qabaa oo ilaa uu dawlada boobaysa danyarta ka baxo, xagayga kaasi waa dacwaysane. Isaguna ha u danbeeyo. DaNana: Wiilka dhan ee reerka haya ee dawladda innoo galay, ee hadii jeel laynagu rido inaga soo daaya, ee cashuurta ka qafiifiya yidhaahda, ee marna minashiibiyada ah, marna guulwadaha, marna bilayska ah, marna cilmi baadhaha ah, innoogu ducee wiilka oo u ducee oo isaga ugu hor guuri ayaan ku leehay. Haddii kale anuu waan iska dudayaa..!
DanYare: Haa …Haa…Dananaay maxaad tidhi, bal kaalay ha dudine, miyaan u duceeyaa wiilka?. Waayahaye dhagayso ducaan ugu heesayaaye. DanYare: (OO HEESAYA)
Anoo Danyaraan ku dhalay
Dabadeed ma galin askari
Anuu Dirays maba qaadanoo
Degtana qori ma saarine
Markaad dugsi quraan dhamaysay
Adoon Duruus kale qaadan
Haddaad Dawlada jeclaatay
Dacwaan kuu qabaaye Aabo DaNana (Ayaa ka hoos jiibinaysa): Adduunka Ninkii dul joogoow
Maxaa Danyare kuu Laaban
Hadduu wiilku dawlad galay
U ducee innoogu ducee DanYaroow inanka u ducee DanYare (oo heestii sii wata): Danyare yaan lagugu xaman
Daliga waligaa kor u taag
Ku dalooli lacagna jeebka
Dadkaad xukuntana Tahriibi
Shuftada Daacad u ahoow
shuftada Daacad u ahoow. DaNana (ayaa hadana kasii hoos jiibinaysa): Ha dacweeyne inanka daa
Inanata Dariskana u hibee…….!.
DANYARE IYO DANANA
Majaajilada Labaad: Sannad Guuro Aroos
Qaybtanina waxay ku saabsan tahay sanad guuradii ka soo wareegtay wakhtigii ay is guursadeen oo ay ku heshiin laayihiin inta sanadood ee kasoo wareegtay.!
DaNana: Dayaroow Nabad maku soo toostay?. DanYare: Danana, sidii xalay an kuseexday ayuunbaan saakana kusoo kacaye, ka soco. DaNana: Sagaalbuu dayaxu,
Ku Sinnaa Xalayoo
Siraad buu lahaaye
Saakaana cirkaan dayay
Sarow eegay samadoo
Cedeceedaa sagaal kale
Ka sidata dayaxiiyoo
Sagaal lagu daray Sagaal
Siday aniga ila tahay
Sideed iyo toban weeyiye
DanaYare ma la socotaa?.. DanYare: Waa saacadahay
Sidii ruux sixran
Ama surucyaba qaba
Saraan cirka u eegiyo
Dayaxaa ii sanqadhiyo
Alien baa ii sanqadiyo
Hadala wada sidaasoo
Wada siloon tidhaahdee
Haday sideed iyo toban
Adiga kuula siman tahay
Aniga waa ii sideed iyo
Afartan ku Sarjarane
Maxaadse uga socotaa
Bal warka i sii DaNanaay ?. DaNana: Allaa, Yaa Saaxiibul Danyare, wa Caqli saqiir waaxid, ma Sagaal lagu daray sagaalbaad tidhi waa siddeed iyo afartan?. Waar waa siddeed iyo toban, oo haddaad sibiq u illowday, Sannad guuradeenii weeyaan, duqyahow lay kaa siiyaye. Iga tun baan ku idhi Danyaroow saaka, hadii kale waa lagu kala socon. DanYare: DaNanaay maxaad tidhi?, Sannad guuradeenii weeyaan, markii laygu kaa sasabay, ?.kkkkkkkkkk. . Horta Dananaany haddaad tidhi waxaynu is ag joogjoognay 18 sanadood, innagoo wada joognay 48 sanadood, waabad innoo xil qarisay oo da’deenii ayaad yaraysaye. Dee allaha ku daaye DaNana, inaan saaka kuu heeso oo aynu xusno wax walba guuradeenii, waxay doontaba ha ahaatee, allaylehe way tahaye, bal heestayda dhagayso: Gugaan ku goobay Koow dheh Gugaaan Kuu guuxay Labo dheh Gugaan kuu goohay Saddex dheh Gugaan kuu gunuunucay Afar dheh
Gugaan kuu gunuusay Shan dheh
Gugii guurkeena Lix dheh
Gugaan is jeclayna Todaba dheh
Gugaan is necbayna Sideed dheh Guyaalkii kalana ku dar dheh
Intaasi oo Gu’ isku geeyooo,
Farxada Gacalooy geeraar
Farxada Gacaloy geeraar.
Majaajilada Koowaad: DaNana oo Toocsanaysa..! DanYare iyo Danana waa duq iyo duqdiisa, waa carrab iyo labadiisa daan oo an kala daysanin hadal. Col iyo nabad midna kuma aha heshiis, Isma dilaan ismana daayaan, isma dugsadaan ismana deyriyaan. Waa Majaajilada HiilDan oo taxane ah. DaNana: DanYaroow ma bariday? DanYare: Barinaybaa lagu yidhiye Danana, dantaada uga soco. Dannana: Allaa, waxan maanta raabaa inaa kuu heeso DanYaroow. DanYare: Iska dibira dhacsaa lagu yidhi Danana. DaNana: (oo heesaysa) Danyare cawdoo
I taalna Darani
Waa waxa dalkeena
Dib u wada dhigee
Noo soo degtaye
Daayimoow ka yeel. DanYare: (jawaab hees) Habar Dananaysoo Iga daynin hadal
Waa waxay Darisku Nooga didayaaneey Laynagu dayrshaye Ma inaan dilay Iga doonaysaa Oo an Daamankiyo Gawsaha dumiyo ……..!!!!!! Waad fahamteen ayaan filayanaa sida laxanka heestaasi u dhacayo – waa sida heestii, “Maantay Galadi Noo Soo Gashee, Gobanimadayada Guulloow Adkee”. La Socda qaybaha soo Socda ee DanYare iyo DaNana. !!!!
Waa Innoo Mar kale iyo Majaajilo kale………..
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...	8 replies	»
4tahir	January 11, 2009 • 06:41	nice skit
Reply ↓	najmah yonis	April 11, 2010 • 12:22	hallo uncle abdiqani i relly happy when i saw your picture in your website i am so glad you calling me bisharo when i was born and i love that name still i have the bithday card and i kept it in a safe place now i am 10 april 4 2010 i hope you a long life uncle you and yor family yussuf mohamud and halimo bye bye nagad mustafa mubarak and hooyo they say bye and hello
Reply ↓	hiildan	April 12, 2010 • 18:34	“Bishaaraan Ku Idhiye, Bilkhayr Adeer Dheh.”
HAPPY BIRTHDAY TO YOU MY MOST BELOVED NIECE.
10 YEARS, is big number, May Allah made you reach more than 10 x 10 years (100 years +).
I will see you soon in person.
HAPPY BIRTHDAY TO BISHAARO M Y ATEYEH.
To My Favourite niece at all time.
Reply ↓	ramiila	May 11, 2011 • 09:52	asc c/qani cateeye ma ficantahay xafadiina kawaran
Reply ↓	zakarie mohamed aswad	May 29, 2011 • 21:41	kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk loooooooooooolz waa majaajilo qosol iyo mad badan ani laftaydu waxan hayaa isla markaana sameyay kuwo casri ah ee fadlan iga qaata
Reply ↓	Abdilaahi Elmi Good	August 23, 2011 • 16:22	wxan salaamayaa bahda Hiildan.com marka labaad wxan leehay Zakarie mohamedow soo daa majaajilooyinkaa aadsheegayso waa loobahanyahaye. waana lagaa sugayaa
Reply ↓	omar	September 10, 2011 • 15:32	kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk waa majaajilo runtii aad u fantastic ah runtiina xigmadi ku jirto
Faaqidaada Arrimaha Bulshada: Caydu Waa Cad Doqoniimo	Fariid on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…amira on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…Kuluc on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…xuseenxagayo on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…guuleed on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…guuleed on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…guuleed on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…ladan on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…guuleed on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…guuleed on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…hiildan on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…Darbisamaroon on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…hiildan on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…guuleed on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…Darbisamaroon on Khudbaddii Taariikhiga Ahayd e…	Dr Cumar Cusmaan Raabe (AUN)Geesiga Dhulkiisa, Guusha U Horseeda, Geerida Dishaay, Geedkaa Ha Go'
Blog Stats	1,210,284 Booqasho - (Mahadsanid Mar Kale Nasoo Bariidi.!)